1.Why we ahọrọ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ gị?
E wuru YUFA na 1987, ihe karịrị afọ 30. Anyị na-eduga ikike R&D n'ahịa, yana ụlọ ọrụ R&D ise na ntọala atọ, 17 na-achịkwa ọkụ ọkụ dijitalụ kpamkpam, ọkụ ọkụ 2, ọkụ ọkụ 1 na ọkụ ọkụ 1, na ikike mmepụta nke 250,000 tọn.
2.You bu onye na emeputa ihe ma obu ahia ahia?
YUFA bụ n'ezie onye na-emepụta ihe, ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ịnye ngwaahịa dị elu na ọnụahịa kachasị mma, mana ọ nwekwara ike ịnye ọrụ kachasị ere ahịa na mgbe emechara.
3. Kedu ụdị ngwaahịa ị nwere ike ịnye?
Ngwaahịa anyị gụnyere akwa-jikọtara ọcha alumina, ala-sodium dị ọcha gwakọtara alumina, ok fused alumina, otu kristal corundum, alumina-magnesia spinel, α-alumina, alumina granulation ntụ ntụ, alumina ceramik na ihe karịrị 300 iche na asatọ usoro.
Na anyị na-enye elu-edu alumina usoro ngwaahịa maka n'elu ahịa na ọtụtụ ubi, dị ka abrasives, elu-okpomọkụmaterials, alumina ceramik, mgbochi corrosion coatings, Ikanam iko, eletriki fillers, egweri na polishing, na thermally conductive ihe.
4.Can gị ụlọ ọrụ na-enye samples ma ọ bụ nwere ike anyị nwere a nleta gị factory?
N'ezie, anyị na-enye ihe nlele n'efu, ma ị nabatara ileta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla.
5. Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị?
Ohaneze ọ bụ ụbọchị 3-5 ma ọ bụrụ na ngwongwo dị na ngwaahịa. ma ọ bụ na ọ bụ 15-20 ụbọchị ma ọ bụrụ na ngwongwo na-adịghị na ngwaahịa, ọ bụ dị na nke ukwu.
6. Gịnị bụ nnyefe gị okwu?
EXW, FOB Tianjin ma ọ bụ ndị ahịa ndị ọzọ 'rịọrọ